Tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း: လျှပ်စစ်နည်းပညာသစ်တစ်ခု ကို ရှမ်းတိုင်းရင်းသား တစ်ဦးမှ တီထွင် အောင်မြင်
အဆိုပါ နည်းစနစ်အတွက် မည်သည့် လောင်စာမှ အသုံးပြုခြင်း မရှိပေ။ ဘွိုင်လာကို ဆူစေပြီး တာဘိုင် နှင့် တွဲကာ ဂျင်နရေတာ တပ်လျှင် မီးစက် ဖြစ်သည်။ ထို ဂျင်နရေတာကို ပန်ကာ တပ်လျှင် သဘောင်္ ပြန်ဖြစ် သွားသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုစနစ်နှင့် လောင်စာမဲ့ သဘောင်္များ သွားလာ နိုင်သည်။ တစ်ချိန်က အသုံး ပြုခဲ့သော မီးသဘောင်္များ အတိုင်း သွားလာ နိုင်သည်။
လောင်စာမဲ့ ဆိုသည့် အတွက် ထိုသဘောင်္တွင် မည်သည့် လောင်စာ ကိုမှ တင်စရာ မလိုတော့သည့် အတွက် ၀န်အား သက်သာ သွားမည်။ ကုန်ကျ စရိတ် သက်သာပြီး လုပ်ငန်းပိုမို အဆင် ပြေမည် ဖြစ်သည်။ မီးရထား တွင်လည်း ကျောက်မီးသွေး စက်ခေါင်း ကဲ့သို့ ဘွိုင်လာ စက်ခေါင်း အဖြစ် ပြန်တပ်ဆင် အသုံးချ နိုင်သည်။
"လျှပ်စစ်မီးထွက်ဖို့ လောင်စာအနေနဲ့ ဘာလောင်စာဆီမှ မလိုပါဘူး။ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်၊ ကျောက်မီးသွေးနဲ့ ဂက်စ်တွေ အသုံးပြုစရာ မလိုဘဲ ကျွန်တော်တီထွင်ထားတဲ့ နည်းပညာထဲကနေ ထွက်တာနဲ့ လျှပ်စစ်တွေဟာ လိုချင်သလောက် ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာကို အခုထိတော့ နာမည် မပေးရသေးဘူး။ လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်က လောင်စာမဲ့ လျှပ်စစ် စွမ်းအင် နည်းပညာလို့ ပေးထား ပါတယ်" ဟု ဦးစိုင်းသန့်ဇင်က ဆိုသည်။ ဦးစိုင်းသန့်ဇင်သည် ယင်းနည်း ပညာကို၎င်း၏ ဆရာဖြစ်သူ ဦးကျော်ဝင်း ထံမှ အမွေ ဆက်ခံ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးကျော်ဝင်းသည် လွန်ခဲ့ သည့် နှစ်၃၀ ကျော်ချိန်ကတည်းက အဆိုပါနည်း ပညာကို စမ်းသပ်တီထွင်ခဲ့ကာ လိုအပ်သည့် အချက် လက်များကို ပြန်လည် ဖြည့် ဆည်းနေချိန် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန် ခဲ့သည်။ "ဆရာနဲ့ကျွန်တော် စလက်တွဲတုန်းက ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကပါ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ဆရာမှာ တပည့် မရှိ သေးပါဘူး။ ဆရာ အဲဒီစက်ကို တီထွင် နေတုန်းပဲ။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း သုံးနှစ်လောက် လေ့လာပြီးမှ ဆရာက သူ့အနားကပ် ခွင့်ပေးတာ။ အဲဒီအချိန်ထိ ကျွန်တော်ဟာ ဆရာ့ဆီက နည်းပညာ တွေကို အကုန် မရခဲ့ သေးပါဘူး။ ဆရာ့နည်း ပညာကိုလည်း ကျွန်တော် လုပ်စားဖို့ စိတ်မ၀င် စားခဲ့ဘူး။ ဆရာ့ ပညာ ကိုလည်း ကျွန်တော် လိုက်မမီ ပါဘူး။ ဆရာဆုံးတော့ ဆရာ့ပညာကို အမွေ ဆက်ခံမယ့် လူမရှိ တာနဲ့ ကျွန်တော် အရဲစွန့်ပြီး လုပ်ခဲ့တာ။ကျွန်တော် ထင်မထားပေမဲ့ အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်" ဟု ဦးစိုင်းသန့်ဇင် က ပြောသည်။
"ကျွန်တော် ဆရာ့ဆီမှာ လုပ်ကတည်းက ဆရာက နည်းပညာတွေ ပြောပြတယ်။ ကျွန်တော်က တပ်ဆင် ပေးရတယ်။ နောက်ပိုင်း ဒီနည်း စနစ်ရဲ့ လုပ်နည်း လုပ်ဟန် တွေကို ကျွန်တော် အကုန်သိ နားလည်တယ်။ ၀ှက်ဖဲ တွေကိုလည်း သိလာတယ်။ ဆရာမရှိတော့ ပေမယ့်လည်း နောက်ပိုင်း ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ဆင် လိုက်တာ လေးလုံး မြှောက်မှာ မီးထွက်တယ်။ အဲ ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကတော့ လျှပ်စစ် မီးထွက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်း တွေက သူ့ဟာနဲ့ သူမဟုတ်တော့ မီးထွက် မမှန်ဘူး။ ဒါကို နည်းပညာ တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီး စမ်းသပ် တာရယ် ငွေမရှိတာ တွေကြောင့် ပိုကြာ သွားတာပါ" ဟု ရှင်းပြသည်။
"ဓန အင်အား ပြည့်စုံတဲ့လူကသာ မတည် ရင်းနှီးငွေ ထည့်မယ် ဆိုရင် ဒီ လောင်စာမဲ့ လျှပ်စစ် နည်းပညာ သစ်ကို အခြေခံပြီး နောက်ထပ် နည်းပညာများ ထပ်မံ ပေါ်ထွန်း လာဦးမှာပါ" ဟု ၎င်း က ပြောသေးသည်။
ဦးစိုင်းသန့်ဇင်သည် ကျိုင်းတုံ ဇာတိ ဖြစ်ပြီး အသက် ၅၃ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ် ကတည်းက စက်မှုနည်းပညာ ကို စိတ်ဝင်စားပြီး ကားများ၏ စက်ပိုင်း ဆိုင်ရာကို တာဝန်ယူ ပြုပြင် ခဲ့ရသည်။ ကိုယ်ပိုင် ဂျစ်ကားများမှ ဂျစ်ဘီလူး အထိ တီထွင် ထုတ်လုပ် နိုင်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဓိကအားဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်သော နည်းပညာ(၅) မျိုးရှိသည့် အနက် ယခု လက်ရှိတွင် နိုင်ငံတော်တော် များများ အသုံး ပြုနေသော ရေဖိအားသုံး တာဘိုင် စက်များဖြင့် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ရေရှည်တွင် ကုန်ကျ စရိတ် သက်သာ ထိရောက် သော်လည်း စတင် တည်ဆောက် ချိန်တွင် တည် ဆောက်စရိတ် အလွန် ကြီးမားသည်။
လောင်စာအတွက် အခက်ခဲမရှိ သော်လည်း ရေရင်းမြစ် ပေါကြွယ်ဝသည့် သဘာဝမြစ်၊ချောင်း၊ ရေတံခွန် များ ရှိနေရမည့် အပြင် ရေအား လျှပ်စစ် ထုတ်လုပ် နိုင်မည့် ရေမြေသဘာဝ ပထ၀ီ အနေထား ကန့်သတ် ချက်များ၊ ရေအား လျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်မည့် နေရာနှင့် မိုင်ပေါင်း များစွာ ကွာဝေး မှုကြောင့် တည်ဆောက် ထားသည့် နေရာနှင့် အနီးဝန်းကျင် မြို့များသာ ပိုမို သုံးစွဲ နိုင်သည်။
အချို့ မြို့များကို လျှပ်စစ် ပေးရာတွင် မိုင်ပေါင်း များစွာ ဝေးကွာ မှုကြောင့် တည်ဆောက် စရိတ် ကြီးမားကာ လိုသလောက် မရနိုင်ပေ။ လောင်စာမဲ့ လျှပ်စစ် ထုတ်လုပ် ခြင်းသည် သဘာဝ ဘေးဆိုးများ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် လေထု ညစ်ညမ်း မှုနှင့် ဆူညံ မှုတို့ဘေးမှ ကင်းဝေးသည်။
ယခုလောင်စာမဲ့လျှပ်စစ်မှာ အဆိုပါ နည်းစနစ်များထက် ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာကာ မည်သည့် အားနည်းချက် မျှမရှိပေ။ ပေ ၁၀၀ ထ ၅၀ ရှိသည့် နေရာတွင် လျှပ်စစ် ထုတ်ကာ တစ်မြို့လုံးကို ၂၄နာရီ ပတ်လုံး မီးအလင်း ပေးနိုင်သည်။ ၁မဂ္ဂါဝပ်တွင် ၀ပ်တစ်သန်းရှိ သည့်အတွက် ၀ပ်သန်း နှစ်ဆယ် ဆိုပါက မြို့လေး တစ်မြို့ကို မီးအလင်းပေး နိုင်သည်။
အဆိုပါစက်မှာ ရှိရင်း စွဲပင်ရင်းမှ ထွက်လာသော အားကို ၁၀ ဆပို ထုတ်လုပ် မည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ၁၂ ကီလိုဝပ် ရှိ မီးစက် အင်ဂျင်မှ ရှိရင်းစွဲ လျှပ်စစ်ကို ယူပြီး ၁၀ ဆပွားလိုက်လျှင် ကီလိုဝပ် ၁၂၀ ထွက်သည်။ ၀ပ်အားဖြင့် တွက်လျှင် ရှိရင်းစွဲ ၀ပ်၁၂,၀၀၀ကနေ ၀ပ် ၁၂၀,၀၀၀ ထွက်သည်။ ထိုထဲမှ ၀ပ် ၅၀,၀၀၀ကို ကောင်းကောင်း အသုံးပြု နိုင်သည်။
ယခုလက်ရှိ နမူနာတပ်ဆင်ထားသော လျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်သည့် စက်မှာ Nichrome (နီကရုန်း) ကြိုးများ တပ်ဆင်ထားသည်။ ယင်းကြိုးများမှာ တစ်ကြိုးလျှင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၃,၆၀၀ မှ ၄,၈၀၀ အတွင်း ထွက်ရှိသည်။ အဆိုပါ ကြိုးမျိုး ၁၂ချောင်း ဆင်ထား သည်။ ထိုအတွက် လိုအပ်သည့် လျှပ်စစ်ကို 12KV ရှိသည့် မီးစက်မှ အားကို ဖန်တီး ယူထားခြင်း ဖြစ်သည်။
12KV မီးစက်ကိုနှိုးပြီး တီထွင်ထားသည့် နည်းပညာ ပုံးထဲမှ ဖြတ်ကာ ဘွိုင်လာ၏ လိုအပ်သည့် နီကရုန်း ကြိုးများ ဆီသို့ ပေးပို့မည် ဖြစ်သည်။ ဥပမာ ဘွိုင်လာမှ နီကရုန်းကြိုး အချောင်း ၁၀၀ လိုလျှင် အချောင်း ၁၅၀ ဆင်ထားမည် ဖြစ်သည်။ တစ်ချောင်း ပျက်လျှင် ထို၅၀ထဲမှ တစ်ချောင်းကို Onလိုက်မည် ဖြစ်သည်။ထို့အတွက် စက်ကို ရပ်ဖို့ မလိုတော့ပေ။
ဘွိုင်လာရှိ PSI ဘားက အရှိန် ၁၂၀ ရောက်မှ ယန္တရားလည်မည်ဆိုပါက ၁၂၀ လွှတ်ပြီး ၂၀၀နှင့်မှ ရုန်းပါက ၂၀၀လွှတ်မည်ဖြစ်သည်။ ဘားပွင့်မှသာ ရေနွေးငွေ့ တာဘိုင် လည်မည် ဖြစ်ပြီး ဖိအားဖြင့် ဒလက်များ လည်စေကာ လျှပ်စစ် ထုတ်ယူ မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံး၏ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုမှာမဂ္ဂါဝပ်၁,၅၀၀ရှိပြီး အနည်းဆုံး မဂ္ဂါဝပ် ၁,၂၀၀လောက် ရရှိလျှင် အဆင်ပြေ သည်ဟု သိရသည်။ ယခုလက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမှန် တကယ်လျှပ်စစ်ရရှိမှုမှာ အနည်းဆုံး ၃၅၀ မဂ္ဂါဝပ်မှ အများဆုံး ၅၈၀မဂ္ဂါဝပ် ထိသာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံး လိုအပ်သည့် မဂ္ဂါဝပ် ထက် အမှန် တကယ် သုံးစွဲမှုမှာ သုံးပုံ တစ်ပုံ သာရှိသည်။
လောင်စာမဲ့လျှပ်စစ်နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်မည်ဆိုလျှင် မြို့တစ်မြို့တွင် မဂ္ဂါဝပ် ၄၀ လိုသည် ဆိုပါက ပေ၁၀၀ ၀န်းကျင်ခန့်ရှိသည့် နေရာတွင် ၂မဂ္ဂါ ၀ပ်ရှိသည့် စက်အလုံး၂၀တပ်ဆင်ထားပါက ၄၀မဂ္ဂါဝပ်ရရှိမည်။ သို့ဆိုလျှင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး လို အပ်နေသည့် လျှပ်စစ်ကို ယခုကဲ့သို့ တီထွင် ဆပွားရင်း အသုံးပြုသွားမည် ဟုဆိုသည်။
၁၈ . ၂ . ၂၀၁၀ l MM < ဟံသာဝတီ>မှကူးယူဖေါ်ပြထားပါသည်
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 1:35 AM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest